Fanolorana lovia miaraka amin'ny Photoshop. | Famoronana an-tserasera
Na ho an'ny fampisehoana takelaka na hifalifaly vetivety dia lazao amin'ireo namantsika fa manomana sakafo tena tsara izahay, na manamboatra hevitra ho an'ny famerenana amin'ny laoniny nefa tsy manam-potoana hikarakarana ny sakafo; hampianatra anao ity fampianarana ity mampiasa sary nohetezana sy aloka hifanaraka amina firindrana mirindra amin'ny sakafo, zava-pisotro ary maro hafa.
Amin'ity indray mandeha ity dia hanao a lovia sakafo maraina miaraka amin'ny voankazo, mofo ary dite. Azonao atao ny mampifanaraka azy amin'ny zavatra tianao manokana, avy amin'ny zava-pisotro maro fotsiny, na sakafo fotsiny, kafe na labiera, voankazo sy legioma, na sakafo haingana.
Manomboka amin'ny sary izay ho azonay avy amin'ireo singa tsirairay izay aseho ao amin'ilay firafitra, sy ny lovia na kaopy izay hampiasainay hampahafantatra ireo.
Haneho anao ny fizotrany amin'ny iray amin'ireo singa fotsiny izahay, ary hatreo dia ho eo izany mamerina ny dingana mitovy ho an'ireo singa hafa.
Raisinay ny volavolan-na mifidy izahay contour ary mamafa isika inona ny ambiny.
Amin'ity tranga ity dia raisinay ilay sombin-paoma avelantsika ary alaintsika mba hahalalantsika azy ireo bebe kokoa. HO AN'NY sosona duplicate mampiasa ny lavitra izahay CTRL + J, ary avy eo ahodinintsika kely ilay sary mba ho hita ny sosona rehetra.
Avy eo mba hanao ny aloka ataontsika tsindrio indroa amin'ny sary ary hiseho ity takelaka manaraka ity.
Eto no handehanantsika Aloka mitovy, ary avy eo dia horaisinay ny aloka, amin'ny fiheverana ilay aloka efa niasan'ny takelakao na kaopy ampiasainay ho ambadika, na ho sary voalohany hanombohana. Amin'ity tranga ity dia nametraka zoro 28% izahay.
Tsarovy fa raha mametraka zavatra isika dia avo kokoa ireo aloka bebe kokoa no hataon'izy ireo, ary ny hafa miparitaka dia tokony hitovy. Mba handraisana ireo antsipiriany ireo dia tsy maintsy amboary ny habeny sy ny offset ny aloky ny parallèle, izay natoronay etsy ambony.
Raha vantany vao mifanaraka amin'ny antsipirian'ny aloka ny zava-drehetra dia averinay amin'ny singa hafa ny fizotrany. Afaka manao mihitsy aza isika tsindrio havanana amin'ny sosona ary safidio ny safidy Adikao ny Layer Style, ary apetaho ny Layer Layer, hanafainganana azy haingana kokoa.
Raha tadiavinay koa, dia afaka manampy sivana farany izay nianarantsika tamin'ny famoronana farany fampianarana taloha, toy ny Color Consultation.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Fanolorana lovia miaraka amin'ny Photoshop.
Smartify no fampiharana "Shazam for art" izay mamantatra sary hosodoko amin'ny tranombakoka manerantany